I-Ultrasonic High Speed Batch Mixers - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-wetting, i-hydration, i-homogenization, ukugaya, ukuhlakazeka, i-emulsification nokuqedwa yizicelo ezivamile zezingxube ze-batch eziphakeme kakhulu ze-Hielscher.
Ukuxubana kwe-batch Ultrasonic kwenziwa ngejubane eliphezulu ngemiphumela enokwethenjelwa, ephindaphindiwe yezinqubo ezivelele embukheni, ebhentshini-phezulu nokukala okuphelele kwezokuhweba.
Ama-homogenizers amaningi e-Hielscher amaningi anikezela ukuxubana okusheshayo kwejubane eliqinile / eliketshezi kanye ne-liquid / liquid liqukethe izinga eliphezulu lomkhiqizo.
I-Speed ​​Speed ​​Batch Ehlanganiswa nama-Ultrasound High Shear Forces
I-homogenizers ye-Ultrasonic yiyona isisombululo sokusika for batch yakho nokuxuba izicelo ukuxuba ezifana ukufakwa kwezinto eziqinile, ukulungiswa kwe-homogeneous dispersions, i-deagglomeration kanye Ukunciphisa Usayizi of izinhlayiyana, hydration, umhlabathi futhi ngokushesha ukuxuba. Imishini ultrasonic sika Hielscher isebenza sub-micron & nano izinto kanye izintambo – okuholela ekusetshenzisweni okuthembekile nokukhishwa kwekhwalithi ephezulu. I izinzuzo ezinkulu of mixing ultrasonic ukusetshenziswa kwalo lula nge ukuhlukumezeka izinto, ukufakwa kwalo okulula ezindaweni ezidinga, isib okubuhlungu izimo, kanye nokuhlanza okusheshayo nokubhubhisa-okuncane ukuhlanza (CIP / SIP) nokubaluleka okukhulu ephansi ukusetshenziswa kwamandla kunobuchwepheshe bokuncintisana (isib. ama mixers e-rotor-stator, abaxube be-jet, abaxube abaphezulu be-shear, i-Ultraturrax).
Uma amagagasi aphezulu e-ultrasound ehlanganiswa ahlanganiswa abe ngamanzi nezidakamizwa, ukushintsha ukucindezela okukhulu / ukucindezelwa okuphansi (isib. Imijikelezo engu-20,000 ngomzuzwana ku-20kHz) kudala amavolumu angenayo noma uvale eketshezi. Lezi zibhamu zikhula ngaphezu kwemijikelezo eminingana kuze kube yilapho ziwela phansi ngesihluku njengoba zingenakuthola amandla amaningi. Phakathi ne-bubble implosion, izimo ezimbi kakhulu zendawo zakhiwa: amazinga okushisa angafika ku-5,000K, izingcindezi ezifika ku-2,000atm kanye nama-jets e-liquid angama-280m / s velocity. Lokhu kwenzeka kuthiwa yi-cavitation. I-Ultrasonic cavitation kusetshenziswe ngempumelelo ukufeza ukuxubaniswa okuhlukahlukene, ukugaya nokugaya, isib. ukucubungula ama-colloids, ama-powders, ama-fluids, amafutha, amafutha, ama-resin, ama-epoxies, ama-pastes e-pigment, ama-inks, amapende, ama-silicones, ama-creams, ama-gel, ama-polymers, ama-urethanes nokuningi okuningi.
I-Ultrasonic Batch Processing
Kungani i-Ultrasonics? – Ukulawula Okugcwele Inqubo
Ukuxuba kwe-Ultrasonic ikuvumela ukuba ulawule yonke imingcele yezinqubo ezibalulekile ngokuqondile. Lokhu kubalulekile ukuze kuzuzwe imiphumela enhle yenkambiso ngenkathi isebenza kahle kakhulu.
Ukufuduka kwezindawo ezizingqayizivele ku-sonotrode (uphondo lwe-ultrasonic / i-probe) kungalungiswa ezidingweni zenqubo ngokubeka amandla kwedivaysi ye-ultrasonic, ukukhethwa kwe-sonotrode kanye nokusebenzisa uphondo lwe-booster.
Ukusebenzisa ingcindezi yenqubo yomsindo izenzo-ukuqinisa, futhi kuthiwa yi-manosonication (MS). I-cavitation ye-ultrasonic ngaphansi kwezingcindezi eziphakeme zikhula kakhulu futhi zikhudlwana. Ngakho-ke, iHielscher inikeza ukucindezela i-batch reactors.
Njengomthetho ojwayelekile, isikhathi eside sokubeletha, ukuqhubeka kwenqubo, isib. Ukunciphisa usayizi, ukusabalalisa njll kuzovela – uma ngabe amandla okwanele asetshenziselwa ukuthinta inqubo yesikhulumi.
I-Ultrasonic iyinqubo yokucubungula engahambisani nethempeli. Ngenxa yomthetho we-thermodynamics, noma kunjalo, amandla ahlanganiswe nendaba azohlale ephelile. Nokho, okuvelele ukusebenza kahle kwamandla Ama-ultrasonicators kaHielscher aqinisekisa ukuthi cishe. Amaphesenti angama-95 kuwo wonke amandla avela ku-ipulaki azoguqulwa abe ama-ultrasound amagagasi futhi ahlanganiswe abe yizinqubo eziphakathi.
I-viscosity yenqubo yokusebenza iyisici esibalulekile ekusetshenzisweni kwe-ultrasonic. Izicelo ezinjengokunciphisa usayizi wezinhlayiyana, ukugaya, nokusabalalisa, ukushayisana kwe-particle okubangelwa yi-cavitational shockwaves ingenye yezinqubo eziyinhloko ezibangela ukuqubuka kwezinhlayiyana, umthwalo ophezulu wezinhlayiya uzuzisa.
Ukunquma izimo zenqubo enhle (= umphumela omuhle ngokufaka okungenani okufakwayo kwamandla okudingekayo), imingcele ekhonjiwe ngenhla kumele isungulwe ngokuhambisana nomgomo wenqubo ohlosiwe.
Ukuhlolwa kwamandla okusebenza kanye nenqubo yokwenza ngcono kungenziwa kalula kubhalom kanye nesiteji esiphezulu. Yonke imiphumela efinyelelekayo ingaba ncamashi yenziwe kabusha futhi i-scaled-up ngokulinganayo kuya kusayizi yokukhiqiza. I-Hielscher Ultrasonics ikunikeza ubuchwepheshe consultancy futhi ifakwe ngokugcwele inqubo yamathuluzi lapho singakwazi khona ukwandisa inqubo nawe noma kuwe!
I-Hielscher inguchwepheshe wakho wezixazululo zenqubo ye-ultrasonic. Thintana nathi namuhla, siyakujabulela ukukuncoma ukuthi ufanele ukuxazulula izidingo zakho zokusebenza!